Lahatsoratra momba an'i Afghanistan
Jolay 23, 2021 Shubham Sharma Afghanistan, Banks, ny vola
Ny banky dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny harinkarem-pirenena. Satria ny vola rehetra eto amin'ny firenena dia hotantanan'ny banky, ny Banky dia tena ilaina amin'ny rehetra, na amin'ny orinasa mihitsy aza. Ho an'ny
Firenena tsy misy Visa ho an'i Afghanistan
Jolay 4, 2021 Maitri Jha Afghanistan, Travel, visa ho
Firy ny firenena manana fidirana maimaimpoana visa ho an'ny pasipaoro any Afghanistan? Araka ny Index Henley Passport, ny olom-pirenena Afghana dia nahazo fidirana maimaimpoana na visa-tonga any amin'ny firenena sy faritany 26 hatramin'ny 5 aprily 2020, nametraka ny pasipaoro afovoany faha 110 ary ratsy indrindra
Novambra 18, 2020 Shubham Sharma Afghanistan, asa
Ho an'ny vahiny dia manana karazana asa isan-karazany i Afghanistan izay mandoa tsara tokoa. Ny tratra dia, eny, any Afghanistan, mila miasa ianao. Noho ny fahatsinjovana karama mafy dia tsara, maro ny olona vonona handray izany
Visa any Afghanistan ho an'ny karana
Oktobra 30, 2020 Antika Kumari Afghanistan, visa ho
Ny olom-pirenenan'i India dia tsy maintsy mizotra mankany Afghanistan mba hitsidihany mpizahatany. Misokatra ny firenena hitsangatsangana miaraka amin'ny torohevitra momba ny dia COVID. Miaraka amin'ny fe-potoana 30 andro dia matetika ny fijanonana ary tapitra ny visa afaka 90 andro. Rahoviana
Makà Visa ho an'i Afghanistan!
Aprily 23, 2020 Shubham Sharma Afghanistan, visa ho
Anisan'ny haingana indrindra hahazo visa i Afghanistan. Masoivoho maro no mamoaka visa fizahan-tany miaraka amina taratasy fangatahana efa vita, sary miendrika pasipaoro, sarany visa, ary pirinty ny pasipaoronao. Manao izany be izy ireo amin'ny andro iray.
Fianarana any amin'ny oniversite any Afghanistan
Aprily 22, 2020 Antika Kumari Afghanistan, fianarana
Mila mianatra ianao hoe iza amin'ireo oniversite mety aminao raha te hianatra any Afghanistan ianao. Raha sendra izany dia te hianatra any amin'ny oniversite any Afghanistan ianao. Avy eo, ny fanapahan-kevitra lehibe iray dia ny mifidy izay hianaranao. efa izahay
Rafitra momba ny fahasalamana any Afghanistan.
Aprily 20, 2020 Antika Kumari Afghanistan, fahasalamana
Ny ady an-trano an-taonany maro no nanapotika ny rafitra fitsaboana sy tsy toy ny firenen-kafa, ny aretina toy ny aretim-pivalanana sy ny aretim-pisefoana dia miakatra ao Afghanistan. Milaza ny The World Bank fa iray amin'ireo ankizy folo no ho faty alohan'ny hahatratrarana azy ireo
Fotoana tsara indrindra hankanesanao any Afghanistan? Fantaro eto!
Aprily 2, 2020 Karuna Chandna Afghanistan, Travel
Afghanistan dia firenena izay efatra samy hafa ny fotoany. Ny oram-panala fahavaratra dia mitondra vovoka. raha toa ny alàlan'ny ranonorana dia mandalo ny ranonorana. Raha ny tokony ho izy, ny fotoana tsara indrindra hankanesana any Afghanistan dia ny Aprily-Mey sy Septambra-Oktobra. Ny fotoana mafana indrindra dia avy